एक Dyre बैंकिंग ट्रोजन कसरी हराउन? Semalt जवाफ प्रदान गर्दछ
Dyre बैंकिंग ट्रोजन एक खतरनाक एडवेयरको रूपमा मानिन्छ कि एक वेबसाइट मा शब्दहरु बीच विज्ञापन सम्मिलित गर्ने क्षमता छ। यी कार्यक्रमहरू जुन उनीहरूको विश्वसनीयताको बारेमा सकरात्मक धारणा सिर्जना गर्दछ र अन्ततः इनलाइन पाठ र विज्ञापनका अन्य प्रकारहरू जस्ता विज्ञापन मार्फत राजस्व उत्पन्न गर्नमा अनावश्यक उद्देश्य हुन्छ। अधिक अनुकूलित विज्ञापन चित्रणको उद्देश्यको साथ ब्राउजर कुकीजमा नजर राख्दै एडवेयरले व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गर्दछ।
धेरै जसो केसहरूमा, यो एडवेयरसँग कार्यान्वयन प्रक्रिया वा तेस्रो-पार्टी प्रोग्रामहरूसँग संगत गरेर संक्रमित प्रणालीमा हमला गर्ने क्षमता छ। यस बाहेक, यो तर्क गरिएको छ कि प्राय: व्यक्तिहरूको कम्प्युटरहरू संक्रमित हुन्छन् जब प्रयोगकर्ताहरूले सार्वजनिक नेटवर्कमा लिंकहरू क्लिक गर्छन्।
डायर बैंकिंग ट्रोजन सामान्यतया तपाईंको ब्राउजरमा अनावश्यक एड-ऑन स्थापना गर्दछ जसले पप-अप, कम कम्प्युटर गति, र ब्राउजर पुनर्निर्देशन जस्ता मुद्दाहरूको परिणाम दिन्छ।
केहि केसहरूमा डायर बैंकिंग ट्रोजनसँग तपाईंको ब्राउजि experience अनुभव बृद्धि गर्ने क्षमता छ। तर यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि लाभहरू तपाईंको प्रणालीमा भएको हानीको तुलनामा कम छन् किनकि तपाईंको ब्राउजरमा विज्ञापनहरू थप गर्नुको साथै यसले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी सlects्कलन गर्दछ। त्यस्तै रूपमा, यो दृढतासाथ सल्लाह दिइन्छ कि तपाईं छिटो नै डाईरे बैंकिंग ट्रोजनलाई तपाईंको प्रणालीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ तपाईको प्रक्षेपण सम्बन्धी समस्याहरूको रक्षा गर्न।
इमान कोनोवालोभ , Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक, मूल्यवान सल्लाहहरूको वर्णन गर्दछ जुन तपाईंलाई यो एडवेयरलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ।
Dyre बैंकिंग ट्रोजन द्वारा खतराहरू
१. यसले सम्भावित खतराहरूमा तपाइँको इन्टर्नेट गतिविधिहरू उजागर गर्दछ। एडवेयरले खतरनाक भाइरस द्वारा हावी भएका खराब परिणामहरूको साइटहरूसँग तपाइँको खोज परिणाम पृष्ठहरू बदल्छ।
२. यसले तपाईंको प्रणालीको सेटि changes परिवर्तन गर्दछ र त्यसो गरेर ह्याकरहरूलाई तपाईंको कम्प्युटरलाई टाढाबाट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
It. यो अन्य हानिकारक खतराहरूसँग सम्बन्धित छ जस्तै गँड्यौलाहरू, एडवेयर, ट्रोजन, स्पाइवेयर सबैमा, तपाइँको कम्प्युटरको प्रणालीलाई नकारात्मक असर गर्दछ।
It. यसले तपाइँको प्रणालीको प्रदर्शन सुस्त बनाउँछ र अन्तत: तपाइँको प्रणालीलाई कुचल्न सक्छ।
प्रक्रिया तपाइँको व्यक्तिगत कम्प्युटरबाट Dyre बैंकिंग ट्रोजन पूर्ण रूपमा हटाउन
तपाईं या त यो एडवेयर हटाउन सक्नुहुनेछ स्वत: हटाउने दृष्टिकोण वा म्यानुअल हस्तक्षेप मार्फत। यदि तपाइँ कम्प्युटर व्यवस्थापनमा जानकार हुनुहुन्न भने, तपाइँलाई स्वचालित उपकरणलाई अपनाउन सल्लाह दिईन्छ।
निम्नलिखित सल्लाहहरूले मैन्युअल्ली भाइरस हटाउन मद्दत गर्न सक्छ:
चरण १ : कार्य प्रबन्धक सुरू गर्ने उद्देश्यको साथ कुञ्जीहरू CTRL + Shift + ESC एकै साथ थिच्नुहोस्। प्रक्रियाहरू ट्याबमा क्लिक गरेर डायर बैंकिंग ट्रोजनसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू फेला पार्न सुरू गर्नुहोस्।
चरण २ : तल उल्लेखित फोल्डरहरूको सूचीमा एडवेयरसँग सम्बन्धित फाइलहरू पत्ता लगाउनुहोस् र हटाउनुहोस्।
% AllUserProfile% \_\_
चरण :: R कुञ्जी + विन्डोज क्लिक गर्नुहोस् र रन बक्समा "regedit" शब्द लेख्नुहोस् र त्यसपछि रेजिस्ट्री सम्पादक आरम्भ गर्न ठीक थिच्नुहोस्।
चरण :: एडवेयरबाट संक्रमित ब्राउजरहरूबाट भाइरससँग सम्बन्धित एड-अनहरू अनइन्स्टल गर्नुहोस्।
मालवेयरबाट तपाइँको पीसी कसरी सुरक्षित गर्ने
इन्टरनेटबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गर्दा र विभिन्न वेबसाइटहरूको भ्रमण गर्दा पनि वेब प्रयोगकर्ताहरू उत्सुक हुनुपर्छ। तपाईंले सुनिश्चित गर्नु पर्दछ कि तपाईंको सबै डाउनलोडहरू सम्मानित वेब साइटहरूबाट आएका छन्। यस सन्दर्भमा, हामी तपाईंलाई तपाईंको कम्प्युटरमा सम्भावित खतराहरूबाट जोगाउन एक शक्तिशाली हटाउने उपकरण राख्न सल्लाह दिन्छौं।